इटहरीको बिकास निर्माण गतिविधिमा पुर्वाग्रही भै रहेको आरोप - Saptakoshionline
इटहरीको बिकास निर्माण गतिविधिमा पुर्वाग्रही भै रहेको आरोप
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र २९, २०७५ समय: १२:५५:०८
इटहरी/ नेपाली काग्रेस सुनसरीका नेता तथा अधिवक्त्ता रमेश कुमार पोखरेलले सामाजीक संजालमा इटहरी उपमहानगरपालीकाको काम प्रती असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले हाल इटहरीमा भईरहेकोे बिकास निर्माण गतिविधिमा पुर्वाग्रही भै रहेको उनले लेखेका छन । उनले नगरले गर्दै आएका गतिविधिहरु प्रती प्रश्नहरु उब्जिएको लेखेका छन ।उनले समाजीक संजाल फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस यस्तो छ ।
इटहरीको बिकास निर्माण गतिविधि पुर्वाग्रही भै रहेको छ।
१) हिजो धरान इटहरी खण्डको आर्मी क्याम्प बाट इटहरी तर्फ सडक ८२ फिट सडक बनाउन अवरुद्ध गर्ने हरु आज पुर्व पश्चिम् १०० फीट बनाउन अगुवाइ गरिरहेका छन। त्यसमाथि पनि राजनैतिक आस्था हावी भएको छ।कसैको भत्काइदै छ । कसैलाइ छाडिदै छ। यसबाट केही प्रश्नहरु उब्जिएका छन ।
क) यो भत्काउनकालागी यहि चाडवाड छेउछाउ नै उपर्युक्त हुन्थ्यो वा अरु कुनै बेला?
ख)अर्काको घर सडक बढाउन भत्काउन जानेले आफ्नो घर अगाडि नबढाउनुको कारण के हो?
ग)भत्काउदा राजनैतिक पुर्वाग्रह राखेर आफ्ना पार्टीको मान्छेको घर अगाडि नछुने ,अर्को पार्टीको मान्छेको अगाडिको भत्काउने यस्तो पुर्वाग्रह बिकास निर्माणमा हुनुहुन्छ कि हुदैन?
२) विकास निर्माण किन सहर केन्दृत बनाइदैछ साविक खनार,एकम्बा ,पकली,हासपोसा,र इटहरी का भित्री वार्ड हरुमा किन विकास पुग्न सक्दैन? पहुच हुनेकामा मात्र विकास पुग्ने हो?
३)अहिले १०० फिट मै सडक बनाउने हैन होला।ती सितल छहारी दिई रहेका रुखहरु ढलाउनु पर्नाका कारण के हुन?
४)ट्याङ्रा पुलको दुर्दशा तर्फ किन मौन? बाढी आउदा चोक ,न पा अगाडि,पस्चिमलाइन हिराहोटल पश्चिम्,बिराटनगर लाइन राधाकृष्ण मन्दिर दक्षिण सडक नै ताल हुने कुरोको समाधान के? न सोच्ने?